Argentina na Uruguay, igodo ndị isi na Copa América - comparatif-audio.net
Argentina na Uruguay, igodo ndị isi na Copa América
Ihe dị na Copa América na-amalite ịbawanye ike, ndị agha ahụ amalitela”kwụpụ na ngwangwa” iji mee ka ebumnobi ha dị ndụ. Otu a ka ọ dị Argentina, nke ga – emeri mmeri na egwuregwu ya na Uruguay, yana, dị ka ọ dị na mbụ, anyị na – enye gị nkọwa nke duel a dị egwu na akwụkwọ egwuregwu.
Ndị Argentin nwere ihe anọ dọtara na egwuregwu ise ha gara aga,n’agbanyeghị ikike, ọ na-esiri ha ike ijikọ ma dị ike. Inweta otu isi abaghị uru nye ha, ha maara na ha chọrọ mmeri ma ọ bụ ọnọdụ ha na otu nwere ike ịdị mgbagwoju anya. Edere ha dị ka ọkacha mmasị na nsogbu nke + 104 * t Akwụkwọ Egwuregwu anyị.
Ejikọtara otu ndị Argentine ka ha nwee ọrụ ndu, ọ nwere ike bụrụ oge ikpeazụ anyị ga-ahụ Lionel Messi na asọmpi a, yabụ ọ ga-apụ ịchọ mmeri website Id nkeji mbụ, mana anyị maara na duels megide Uruguay bụ ezigbo ochie na anụ ahụ ọkụ, yabụ na ọ gaghị adị mfe.
Soro egwuregwu bọọlụ niile na akwụkwọ egwuregwu anyị
ma bido taa inweta Strendus
Onye na-azọ ọchịchị
Uruguay rutere na egwuregwu atọ na-enweghị ike ịme goolu ma mara na ọ ga-edozi nsogbu ahụ,n’ihi na ọ bụrụ t o nwere ihe nke ọkwa mbụ, ọ bụ ndị na-agan’ihu ya, nke Luis Suárez na Edinson Cavani duziri. Ha ga-eji akara + 252 wụtuo n’ọhịa.
Maka otu ndị otu Uruguayan bụ nke izizi han’asọmpi a ma ha mara na ọ dị mkpa ibido mmeri, ha enweghị nnukwu nrụgide ka ndị na-ama ha aka na nke ga-enyere ha aka igwu egwu nke ọma. Esemokwu a bụ nke a na-egwuri egwu n’oge kachasị na akụkọ ntolite na ngụkọta nke egwuregwu 194 na Albiceleste meriri 89.
Na-ebi ndụ obi ụtọ na agụụ niile nke egwuregwu na South America na Copa America a, gaa na Akwụkwọ Egwuregwu anyị ma họrọ ọkacha mmasị gị iji merie. Chee echiche ọzọ ma merie egwuregwu ahụ na Strendus.
* Nsogbu ịgbanwe